DOWNLOAD NY DIARY & DIARY FARANY FARANY - PROGRAMME REVIEW - 2019
Diary & Diary 1.1.1
Ny rakitra toy ny steam_api64.dll dia tranokala izay mampifandray ny fampiharana ny mpanjifan'ny Steam sy ny kilalao novidina tao. Indraindray ny fanavaozana ny mpanjifa fampiharana dia mety manimba ny antontan-taratasy, izany no mahatonga azy hikoriana. Ny hevi-diso dia hita amin'ny dikan-tenin'ny Windows amin'izao fotoana izao.
Fomba fijerena ny olana amin'ny steam_api64.dll
Ny safidy voalohany sy mazava indrindra dia ny manavao ny lalao: ny sora-baventy diso dia haverina any amin'ny toerana tianao. Alohan 'izany dia mamporisika antsika hampiditra ity antontan-taratasy ity amin'ny antontanisa antivirus - raha manohana ny fanovàna ny lalao, dia matetika izy ireo no mampiasa rakitra miova izay ahitan'ny rindrambaon-tserasera ho toy ny loza mitatao.
Vakio bebe kokoa: Ahoana no ampidirana ny antontan-taratasy ho an'ny fisintonana Antivirus
Ny fomba faharoa manampy amin'ny fiatrehana ny olana dia ny famerenana manidina ny tahiry very ary mametraka izany ao amin'ny ordinatera. Tsy ny fomba tsara indrindra, fa mahomby amin'ny toe-javatra sasany.
Fomba 1: Manamboara ny lalao
Ny tranokin'ny steam_api64.dll dia mety ho simba noho ny antony maro: anton-dresaka mavitrika, fanoloana ny mpampiasa azy, olana amin'ny sarotra sarotra sy ny hafa. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ampy ny manaisotra ny lalao ary manavao azy amin'ny alàlan'ny fanadiovana ny rejisitra.
Esory ny lalao amin'ny fomba izay mifanaraka aminao - misy iray manerana izao tontolo izao, misy manokana amin'ny dikan-teny samihafa an'ny Windows (ohatra, ho an'ny Windows 10, Windows 8 sy Windows 7).
Manaova fanadiovana ny rejistra - ilaina dia ny lalao dia tsy manangona ny làlana mankany amin'ny rakitra diso voarakitra ao amin'ny rafitra. Ny dingana toy izany dia voafaritra amin'ny antsipiriany ao amin'ity boky ity. Azonao ampiasaina koa ny CCleaner ho an'ity tanjona ity.
Vakio bebe kokoa: Manadio ny rejisitra amin'ny CCLeaner
Atsaharo ny lalao, aorian'izany azonao antoka fa nataonao steam_api64.dll ny fisorohana antivirus. Tsara ihany koa ny tsy mampiasa ny solosaina ho an'ny asa hafa mandritra ny dingana fametrahana: noho ny faharetan'ny RAM dia mety tsy hahomby izany.
Amin'ny ankapobeny, ireo fepetra ireo dia ampy ho an'ny famahana olana.
Fomba 2: Apetraho ny steam_api64.dll ao amin'ny ordinatera
Ity fomba fampianarana ity dia ilaina ho an'ireo mpampiasa izay tsy maniry na tsy manana fahafahana hanala ny lalao amin'ny scratch. Ampiasao ity manaraka ity.
Ampidiro ny DLL ilaina any amin'ny toerana misy ny disk drive.
Ao amin'ny birao, tadiavo ny fohy ny lalao, ny famoahana izay mahatonga ny fahadisoana. Tsindrio eo ankavanana izany, ary mifidiana ao amin'ny menu context "Toerana ny rakitra".
Ny lisitry ny loharanom-baovaona dia hisokatra. Amin'ny fomba mety, kopia na manosehana steam_api64.dll ho an'ity lahatahiry ity. Ny tery sy ny dity tsotra dia mety koa.
Atsaharo ny ordinateranao, ary andramo ny manomboka ny lalao - raha ny marina, ny olana dia hanjavona ary tsy hiseho indray.
Ny safidy voalaza etsy ambony dia tsotra sy mahazatra indrindra. Ho an'ny lalao sasany anefa, dia misy fepetra voafaritra sasany azo atao, saingy tsy miezaka ny milaza azy io ato amin'ity lahatsoratra ity.
Mba hisorohana ny olana toy izany, manoro hevitra izahay fa tsy mampiasa rindrambaiko azo ampiasaina fotsiny ianao!